के हो ऋषि कपुरको मृत्युभन्दा एक दिनअघिको भन्दै भाइरल भएको भिडियोको सत्य ? - Nepal Factcheck
के हो ऋषि कपुरको मृत्युभन्दा एक दिनअघिको भन्दै भाइरल भएको भिडियोको सत्य ?
बलिउडले एक दिनको अन्तरालमा दुई प्रतिभाशाली कलाकार गुमायो। सुरुमा इरफान खान र भोलिपल्ट ऋषि कपुर। ऋषि कपुरको मृत्युसँगै नेपालमा पनि सोसल मिडिया प्रयोगकर्ताहरु माझ एउटा भिडियो भाइरल भयो। भिडियोमा ऋषि कपुर अस्पतालको बेडमा देखिन्छन् र एक जना व्यक्ति उनले अभिनय गरेको फिल्मको गीत गाउँदै छन्। भिडियोसँगै मन छुने दावी पनि थियो। लेखिएको थियो- ‘मृत्युकाे अघिल्लो दिन अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीले गाएकाे उनकाे दिवाना फिल्मकाे यो गीत सुनेर आशीर्वाद दिँदै ऋषि कपुर। अरुलाई आशीर्वाद दिँदै आफूले संसार छाडे। सायद मृत्युु यस्तै हुँदाे रहेछ।’ नेपाली सेलिब्रिटीका नाममा खोलिएका फेक फेसबुक पेजमात्र हैन, केही अनलाइनले त यसबारे समाचार पनि बनाए। त्यसो त भारतीय मिडियाले पनि यसबारे समाचार बनाएकै थियो।
के साँच्चिकै यो ऋषि कपुरको मृत्युभन्दा एक दिन अगाडिको भिडियो थियो त? हामीले यसमा फ्याक्टचेक गरेका छौँ।
नेपाली प्रयोगकर्ताले फेसबुक र ट्विटरमा यो भिडियो निकै फैलाए। त्यतिमात्र होइन, शुक्रबार मध्याह्न हेर्दा युट्युब नेपाल ट्रेन्डिङको १८ नम्बरमा यही भिडियो रहेको छ।
यो भिडियोका किफ्रेमहरुबाट खोज्ने क्रममा युट्युबमा यो भिडियो धीरजकुमार सानुको अकाउन्टबाट दुई महिनाअघि अर्थात् फेब्रुअरी ३, २०२० मा नै अपलोड भएको पाइएको छ।
आफ्नो भिडियो सोसल मिडियामा भाइरल भएपछि उनले आफ्नो युट्युबमा एउटा अर्को भिडियो राखेका छन्, जसमा उनले यो भिडियो दुई महिनाअघिको भएको स्पष्ट पारेका छन्। उनी भन्छन्, ‘यो गलत भिडियो नफैलाउनुस्। यो भिडियो हिजोको हैन, २ फेब्रुअरीको हो।’ उनले आफू नयाँ दिल्लीको एउटा अस्पतालमा काम गर्ने पनि बताएका छन्। ऋषि कपुरको मृत्यु भने मुम्बईको अस्पतालमा भएको थियो।
गुगलमा खोज्ने क्रममा फेब्रुअरीमा ऋषि कपुर नयाँ दिल्लीको अस्पतालमा भर्ना भएको समाचार पढ्न पाइन्छ।
भारतको इन्डिया टुडे, क्विन्ट आदिले पनि यो भिडियोको फ्याक्टचेक गरी यसलाई गलत बताइसकेको छ।
त्यसैले नेपाली सोसल मिडिया प्रयोगकर्ताहरुमाझ भाइरल भएको भिडियोमा गरिएको दावी गलत छ। यो भिडियो मृत्युभन्दा एक दिनअघिको नभएर दुई महिनाअघिको हो। पुरानो भिडियोमा गलत दावी गरी भ्रामक रुपमा फैलाइएको छ।